50 Casharrada Sawirka Hal abuurka | Abuurista khadka tooska ah
Markaan arkay in heerkaaga Ingiriisigu aad u fiican yahay, gaar ahaan dhinaca farsamada, ayaan go’aansadayAma inaan u adeegsan karno xoogaa casharro ah oo loogu talagalay naqshadeynta sawirrada vectorized ee Illustrator, Photoshop iyo kuwa kale.
Aniga shaqsiyan wax yar ayaan ka qabtay casharrada aan halkaan ku hayno waxaanan kuu sheegi karaa inay fududahay in la raaco haddii aad leedahay amar cadaalad ah oo mawduuca ku saabsan, fudud oo la fahmi karo oo si cad loo xiiseeyo in la sameeyo.
Ha moogaan iyaga ka dib boodka.
1 1. Abuur shabeel yar oo qurux badan oo sawir leh
2 2. Abuur Dabeecad Ilmo Cunug Cute ah oo muujiye ah
3 3. Sawir Samurai Yar oo Xanaaqsan Sawirka
4 4. Abuur Mascot astaamo leh Adobe Illustrator CS4
5 5. Sida Loo Abuuro Guumays Xiiso Leh Sawirka CS4
6 6. Abuur Muuqaal Muuqaal Caan ah oo Panda Bear ah
7 7. Abuur Cunsur Cunno Farshaxanimo Cute ah oo muujiye ah
8 8. Sida Loo Beddelo Sawir-gacmeedka Sawir-gacmeedka Duugga Duugga ah
9 9. Abuur Wejiga Daanyeer Bakhayl ah
10 10. Sida loo Abuuro Slim Anime Character ee Photoshop
11 11. Abuurista Astaamaha Vector ee Sawirka
12 12. Abuur Dabeecad Faraxsan Qorraxda
13 13. Abuur Mascot astaamihiisa Dabeecad Arday leh Adobe Illustrator
14 14. Abuur Waraaq Sawir Sawireed
15 15. Casharo Daanyeer Photoshop Cashar
16 16. Ka abuur astaamaha Kaartuunka 'Vector Pirate' oo laga soo qaaday Sawirka Gacanta
17 17. Samee Calaamado Buluug Buluug ah laga soo bilaabo Sawirka Qalinka illaa Midabaynta
18 18. Sida loo abuuro Zombie Hilib-cun ah oo Zumbie uraya Sawirka
19 19. Ku Samee Xarfaha Kartoonada Fudud ee Photoshop
20 20. Sida loo abuuro Muuqaal Twitter qurux badan oo qurux badan oo ku yaal Photoshop
21 21. Samee Dabeecad qaboojiyaha Vector Panda ee Sawirka
22 22. Sida loo Abuuro Dabeecad Dabeecad qabow oo Sawire ah
23 23. Abuur Casharro Waxbarista Cayayaanka ah ee loo yaqaan 'Lady Shimbiraha' iyadoo la adeegsanayo Adobe Illustrator
24 24. Sida loo Sameeyo Dabeecad Bunny Cute ah
25 25. Abuur Cunto Cute ah oo Cilmiga Ka Muuqda
26 26. Taxanaha Cilmiga Horumarinta Astaamaha
27 27. Naqshadeynta Dabeecadaha ee Nolosha
28 28. Sida Loo Abuuro Astaamaha Qaab-qoraalka
29 29. Sawiridda Homer Simpson
30 30. Abuuritaanka Astaamaha ee Adobe Illustrator
31 31. Sida loo Abuuro Sawirka Vector loona diyaariyo iibinta Micro-Stock
32 32. Sida Loo Sameeyo Dabeecad Vector
33 33. Sawiridda Sawirka Bisadda Muuqaal-Vector-u-eegista iyadoo la adeegsanayo Photoshop
34 34. Astaamaha Kartuunka - Dexter
35 35. Sida Loo Sameeyo Robot Warqad animation ah
36 36. Ku samee astaamo Bean Midab leh oo ku saabsan Sawirka CS4
37 37. Abuur Wejiga orso murugeysan
38 38. Sida loo Sameeyo Cheeky Koala Mascot Head
39 39. Abuur Wejiga Goof Bakeylaha
40 40. Abuur Dabeecad Lagu Wado Farshaxanka Buugga Isticmaalka Sawirqaade iyo Photoshop
41 41. Sida Loo Sameeyo Naqshad T-Shirt Naqshadeysan oo Cagaf Cagaf ah
42 42. Sida Loo sawiro Astaamo Ey Ey qurux badan oo Sawirqaade ah
43 43. Sawir Nice Punk Kid oo ah Sawiraha
44 44. Sida Loo sawiro Tallaabada Tallaabada Tallaabo
45 45. Ka sameyso Kaar Doofaar Cute ah Sawirka
46 46. ​​Abuurista Astaamo lagu qanci karo
47 47. Sawirka Astaamaha: Tuug Bunny!
48 48. Sida loo sawiro Sawirka Shinnida oo qosol badan
49 49. Naqshad Catar Hamster Cute ah
50 50. Sawir Astaamo Caan ah oo Dheddig ah
1. Abuur Tiger Cute yar oo sawir leh
Casharradan, waxaad ku sawiri doontaa shabeelka, laakiin waxaad ku samayn doontaa wax yar oo ka duwan. Halkii aad shabeelka uga muujin laheyd xayawaan naxariis daran oo macna leh, wuxuu qoraagu ku bari doonaa sida loo sawiro shabeel yar oo qurux badan oo aad awoodi doontid inaad ku isticmaasho mashaariicdaada, sida gidaarka gidaarka desktop, iwm Waxaad sidoo kale baran doontaa farsamooyin Sawireed badan sidoo kale. Kani waa barashada ugufiican sanadka 2010, sanadka shabeelka.
2. Abuur Dabeecad Ilmo Cunug Cute ah oo muujiye ah
Casharrada bahallada dulinka ah ee loo yaqaan 'Vector monster tutorial' oo loogu talagalay dhammaan adiga naqshadeeyayaasha baranaya Sawirka si aad ugu dhegto Isticmaal qaababka aasaasiga ah ee Sawirka si aad u sameysid dulucda iyo qaabdhismeedka dabeecad qurux badan oo cunug ah, ka hor intaadan ku darin midabka, jadwalka iyo saamaynta si aad nolosha ugu keento qaabeynta
3. Sawir Samurai Yar oo Xanaaqsan Sawirka
Casharkaan wuxuu ku tusi doonaa sida loo sawiro samurai Sawirka iyada oo la adeegsanayo qaabab, waqti firaaqo iyo rabitaan.
4. Ku abuur Mascot astaamo leh Adobe Illustrator CS4
Casharradan dhex dhexaadiyaha ah ee Sawir-qaadaha waxaa lagusoo bandhigi doonaa sida loo abuuro mascot dabeecad vekto ah oo laga helo sawirka Adobe Illustrator CS4 Farsamooyinka casharradan ayaa si fudud loogu adeegsan karaa sawirada kale, astaamaha, iyo walxaha naqshadeynta; iyo waliba noocyada dhaxalka ee Sawirka.
5. Sida Loo Sameeyo Guumays Cajiib ah Sawirka CS4
Baro sida loo abuuro muuqaal aan cabsi lahayn oo la dhigay makhribkii, oo guumaystaha xiisaha lihi ku fadhiyo laan iyo muuqaal muuqaal ah oo xagga dambe ah.
6. Abuur Muuqaal Muuqaal Caan ah oo Panda Bear ah
Casharka soo socda ee fudud, waxaa lagusoo bandhigi doonaa sida loo abuuro muuqaal qurux badan oo panda bear face ah oo dhan laga soo qaaday ellipses (si fiican, dhab ahaantii waxaa jira hal leydi oo asalka ah) Qaybta ugu weyn ee ku saabsan casharradan, ayaa ah inaad si fudud ugu adeegsan karto farsamooyinka astaamo kale, sawirro, astaamo, ama mashaariic kale.
7. Abuur Jaangooyo Cute Furry Vector ee Sawiraha
Raac talaabooyinkan Adobe Illustrator si aad u abuurto dabeecad aad uwanaagsan oo qurux badan. Waxaad la shaqeyn doontaa qaababka aasaasiga ah si aad u bilowdo, ka dibna u isticmaal noocyo kala duwan oo cufnaan ah si aad ugu darto qoto dheer Waxaad markaa ku dhammeyn kartaa qaar ka mid ah saamaynta dhogorta oo faahfaahsan si aad runtii uga qaaddo naqshadda shaashadda.
8. Sida Loo Beddelo Sawir-gacmeedka Sawir-gacmeedka Duugga Duugga ah
Casharradan ayaa looga dan leeyahay inay kaa hagto buug-gacmeedka illaa shaashadda; a "Fat Cat" ayaa lagu sawiray biro oo loo tarjumay caricature vector nadiif ah. Aqoonta dhexe ee Adobe Illustrator ayaa lagula talinayaa.
9. Abuur Wejiga Daanyeer Bakhayl ah
Casharradan ayaa kaa caawin doonta inaad abuurto sawir fudud oo wajiga daanyeer ah. Waxay u adeegsaneysaa qalabka 'Ellipse Tool', Qalabka qalinka, Qalabka 'Laydikle', Qalabka loo yaqaan 'Crystallize Tool' ama 'Gradient Tool'. Saameynta hooska waxaad u isticmaali doontaa qaar ka mid ah saamaynta caadiga ah sida 'Inner Glow' ama Gaussian blur.
10. Sida Loo Abuuro Slim Anime Character ee Photoshop
Casharkaan, waxaad ku baran doontaa sida loo sawiro dabeecada Anime Style. Si aad u bilawdo, waxaad ku tiirsan tahay qaababka aasaasiga ah iyo Qalabka Burushka Sidoo kale, waxaad baran doontaa mid ka mid ah farsamooyinka shaqsiyeed ee qoraha ee uu ugu yeedho "Muraayadda hore" oo uu u isticmaalo ku dhowaad mid ka mid ah mashruucyadiisa animation. Farsamadan ayaa kaa badbaadin doonta waqti badan, waxayna kaa caawin doontaa inaad u soo jiido jilayaal badan mashaariicdaada si aad u dhakhso badan.
11. Abuurista Astaamaha Vector ee Sawirka
Dabeecadani waxaa loo abuuray inay noqoto mascot noocyo kala duwan ah, oo loogu talagalay da 'kasta. Waxaa looga faa'iideysan karaa cabbirro kala duwan, iyo daabac iyo muuqaalba. Eeg faahfaahin ku saabsan habka loo maro PDF-ka sida loo sameeyo.
12. Abuur Dabeecad Qorraxda Farxad Leh
Casharradan dhex-dhexaadka ah waxay u fiican tahay astaamaha, sawirrada carruurta, iyo mashaariic kale oo la xiriira isbeddelka cimilada. Intaa waxaa dheer, waxaad si fudud ugu adeegsan kartaa casharradan tusaalooyinka kale, astaamaha, iyo mashaariicda.
13. Abuur Mascot astaamihiisa Dabeecad Arday leh Adobe Illustrator
Kani waa heer cashar dhexdhexaad ah oo muujiye ah halkaas oo aad ka baran karto sida loo abuuro astaamo dabeecad arday vector ah oo ka socota sawir ku jira Adobe Illustrator. Farsamooyinka ayaa si fudud loogu adeegsan karaa qaabeynta dabeecadaha kale, sawirrada ama astaamaha.
14. Abuur Waraaq Sawir Sawireed
Tababarkan ka dib waxaad awoodi doontaa inaad abuurto sawir gacmeed sawir leh oo ku yaal Photoshop sida sawirka hoose. Casharradan waxaad diiradda saari doontaa qaababka, ballaarinta iyo adeegsiga lakabyada kooxeed.
15. Casharo Daanyeer Photoshop Cashar
Maqaalkani wuxuu kuu sharixi doonaa tallaabo-tallaabo sida uu qoraagu ugu qaabeeyey dabeecad soo jiidasho leh mid ka mid ah mashaariicdiisii ​​ugu dambeeyay, kuwaas oo loogu talagalay shirkadda “Daanyeerka Daanyeerka Aruuriya”. Wuxuu dib u eegi doonaa geedi socodka naqshadeynta oo dhan, laga soo bilaabo sawirradii ugu horreeyay iyo qoraallada illaa taabashada ugu dambeysa ee Adobe Photoshop.
16. Ka Abuur Sawir gacmeed Burcad Badeedka Gacanta Sawirka
Marka ugu horeysa adoo adeegsanaya awooda qalinka iyo warqada naqshad dabeecad ayaa la abuuray, taas oo markaa lagu dhex baarayaa kombiyuutarka si loogu isticmaalo saldhiga baafinta Adobe Illustrator. Natiijada ugu dambeysa waa dabeecad kartoon midab leh oo qaab vector ah.
17. Samee Calaamado Buluug Buluug ah laga soo bilaabo Sawirka Qalinka illaa Midabaynta
Tababar deg deg ah oo aad ku sameyn doontid wax muuqaal buluug ah ah. Waxaad ku adeegsan doontaa Photoshop-ka casharkaan, laakiin ha iloobin qalin iyo warqad maxaa yeelay waxaad ku bilaabi doontaa tan sawir gacmeed.
18. Sida Loo Abuuro Zombie Hilib-cun Udhis ah Sawirka
Casharkaan, waxaad ku arki doontaa sida loo abuuro zombie kartoon ah Sawirka. Adiga oo ka bilaabaya abuuritaanka mayd cusub, markaa waad 'yuck' doontaa adiga oo isticmaalaya farsamooyin dhowr ah.
19. Abuur Astaamo Kartoon Fudud oo Photoshop ah
Waxaa lagugu dhex mari doonaa aasaaska farshaxanka vector-ka midabada leh si aad ugu socoto Photoshop CS iyo mid cusub.
20. Sida loo Abuuro Muuqaal Twitter qurux badan oo lagu farxo Photoshop
Casharkaan, waxaad ku baran doontaa sida loo abuuro astaan ​​Twitter qurux badan oo qurux badan. Inta lagu guda jiro casharradan, waxaad isticmaali doontaa qaar ka mid ah aaladaha aasaasiga ah sida Ellipse Tool, Qalabka qalinka iyo Qalabka Wehliyaha.
21. Abuur Dabeecad Panda Vector Panda ah oo muujiye ah
Waa kuwan tallaabo tallaabo tallaabo tallaabo-tallaabo ah ee loo adeegsaday abuurista dabeecad qabow Panda, laga soo bilaabo tilmaamaha aasaasiga ah illaa iyo qaabka ugu dambeeya ee faahfaahsan.
22. Sida Loo Abuuro Dabeecad Dabeecad Qabow oo Sawire ah
Casharradan, waxaan ku abuuri doonaa sawir dabeecad daanyeer iyadoo la adeegsanayo Adobe Illustrator. Waxaad adeegsan doontaa Qalabka Qaab-dhismeedka aasaasiga ah, Qalabka qalinka iyo farsamooyin kale oo kala duwan oo sawir-qaade ah si loo abuuro sawirka.
23. Samee Casharro Cayayaanka Lady Shimbiraha Isticmaal Adobe Illustrator
Waxaad ka heli kartaa cayayaankaan yar yar ee qurxoon inay joogaan meel walba waligoodna waxna ma sababi doonaan laakiin farxad. Casharkaan waxaa lagugu tusi doonaa sida loo abuuro hal shimbir haweeney qabow iyadoo la adeegsanayo Adobe Illustrator.
24. Sida Loo Sameeyo Dabeecad Bunny Cute ah
Casharradan tusaalaha ah, waxaad ku arki doontaa sida loo abuuro dabeecad qurux badan oo bunny ah. Casharradan waxaa loo isticmaalaa qaabab fudud iyo jijimooyin fudud oo lagu dabakhi karo sawirrada dabeecadaha kale. Waxa ugu weyn ee ku saabsan casharkaan maahan inaad noqotid farshaxan yaableh si aad u awoodo tan.
25. Abuur Cunto Cute ah oo Cunto ah oo laga soo qaaday Sawirka
Casharkaan waxaad ku arki doontaa sida loo abuuro abuur quruxsan oo laga soo sawiro. Casharradan waxaa loo isticmaalaa burushyo gaar ah, aaladda Rinji burushka, Qalabka qalinka, iyo aaladda Rinjiga Rinjiga ee Noolaha. Xitaa haddii aadan taageere weyn u aheyn goynta, waxaad u isticmaali kartaa farsamooyinkan sawirro kale, astaamo, iyo walxaha vector-ka.
26. Taxanaha Cilmiga Horumarinta Astaamaha
Taxanahan casharka ah ee fiidiyowga ah ee 5 qayb ah adoo adeegsanaya iskudhafyo sawirro ah, fiidiyoow, iyo faallo ayaa kugu socon doona adiga oo maraya habka loo abuurayo dabeecad lagasoo bilaabo xoq. Tabobarkani wuxuu qabanayaa shaqo weyn oo ku tusaysa sida loo dabciyo, loo sahamiyo fikradaha, loona horumariyo fikradaha farshaxanno dhammaystiran.
27. Naqshadeynta Astaamaha Nolosha
In yar oo ka mid ah casharrada fiidiyoowga ah ee garabka-garabka ah, David Colman, ayaa la wadaagaya qaar ka mid ah talooyinka ku saabsan adeegsiga dhiirrigelinta nolosha dhabta ah si loo abuuro jilayaal u gaar ah. Maxaa taxanahan runtii ka dhigaya kuwo ifaya, si kastaba ha noqotee, taasi waa tan soo bandhigaysa aragti ah sida aad sawiradaada ugu qaadi karto heerka xiga adoo fulinaya walxaha naqshadeynta fudud iyo wax ku oolka ah.
28. Sida Loo Abuuro Astaamaha Qaab-qoraalka
Baro sida loo qaato qaybo kala duwan oo ka mid ah astaamaha nooc font gaar ah oo la isku dhejiyo, iyagoo dhalaya noocyo kala duwan oo xayawaan ah.
29. Sawiridda Homer Simpson
Casharradan ayaa ku bari doonta sida loo sawiro jilitaanka Simpson ee 'Homer Simpson' asal ahaan. Mashruucaaga sawirku wuxuu ku lug yeelan doonaa sawiridda astaamaha astaamaha, ku dhejinta istaroog tilmaamahan, ka dibna u adeegsanaya aalado xulasho kala duwan midabaynta midabka maqaarka iyo dharka. Kadib waad dhameyn doontaa adoo kudaraya hooska iyo iftiiminta si aad ugu ekaato sawirka hoose.
30. Abuurista Astaamaha ee Adobe Illustrator
Cashar fudud oo aad ku baran karto farsamooyinka aasaasiga ah ee abuurka dabeecadda.
31. Sida loo Abuuro Sawirka Vektorka loona diyaariyo iibinta Micro-Stock
Waxaa jira degello internetyo tiro badan oo bakhaarrada naqshadeeyayaasha u qaabeyn kara oo ku kasban kara dakhli isdaba joog ah. Casharradan waxay faahfaahin ka bixineysaa socodsiinta shaqada ee xirfadleyda ah ee loogu talagalay abuurista sawirrada vektorka iyo diyaarinta farshaxanka bogaggaan. Waxaa sidoo kale ku jira farabadan oo ah qalab waqti lumis ah iyo talooyin sidoo kale.
32. Sida Loo Sameeyo Dabeecad Vector
Casharradan ayaa kugu dhex socon doonta abuurista astaanta astaamaha dulinka iyadoo la adeegsanayo Adobe Illustrator iyo Photoshop CS4.
33. Sawiridda Sawirka bisadda Vector-u ekaanta iyadoo la adeegsanayo Photoshop
Haddii aad tahay qof bilow ah ama hiwaayad ah, casharradan ku saabsan websaydhadu hubaal waxay kuu noqon doontaa faa'iido weyn. Ujeeddada casharradan ayaa ah in lagu dhajiyo nalka ugu dhow habka loo abuurayo sawirka la doortay. Talaabo talaabo waxaad ku arki doontaa geedi socodka oo dhan adoo kaashanaya qoraalada qoraaga waad cadeyn doontaa dhamaan heerarkaan.
34. Astaamaha Kartuunka - Dexter
Dexter waxay u badan tahay inuu yahay mid ka mid ah jilayaasha kartoonada ah ee aan u baahnayn hordhac, laakiin si kastaba ha noqotee, kuwa aan waligood maqal wax ku saabsan isaga, Dexter waa caqli yar oo leh sheybaar weyn oo sir ah oo ay ka buuxaan hal-abuurradiisa weyn. Casharkaan fudud waxaan ku tusi doonaa sida loo sawiro dabeecaddan gudaha Adobe Illustrator.
35. Sida Loo Sameeyo Robot Paper animation ah
Casharkaan waxaad ku dhex mari doontaa tillaabooyinka nashqadeynta iyo sameynta astaamo astaamo jilicsan. Kaliya maahan sawir, tani waa dabeecad dhaqaaqaysa oo si fiican ugu fadhiisan doonta dusha sare ee kumbuyuutarkaaga.
36. Ku samee astaamo Bean Midab leh oo ku saabsan Sawirka CS4
Baro sida loo sawiro astaamahan muuqaalka leh ee cajiibka ah adoo adeegsanaya Qalabka Pen iyo Gradients.
37. Abuur Wejiga Bear Cabbaar
Casharkaan waxaad ku baran kartaa inaad abuurto waji orso murugo leh. Qaababka aasaasiga ah waxaad u baahan doontaa oo keliya Qalabka Ellipse iyo qaar ka mid ah saamaynta Warp. Goor dambe, wixii faahfaahin ah oo gaar ah, waxaad u baahan doontaa Iftiinnada Gudaha, Gawsiga Gawaarida ama Hooska Drop.
38. Sida Loo Sameeyo Cheeky Koala Mascot Head
Casharradan ayaa ku tusi doonta sida laysugu daro qaababka aasaasiga ah iyo midabaynta xariifka ah iyo isku darka si aad uhesho muuqaal qurux badan oo koala ah. Waxaad u adeegsan doontaa qaar ka mid ah waji-madoobeedka, buraashka, jilayga iyo saamaynta, marka lagu daro farsamaynta fududaanta hooska waxaad isku arki doontaa adigoo isticmaalaya mashaariic kale oo badan.
39. Abuur Wajiga Bunny Goofy
Casharka soo socda ayaa kaa caawin doona inaad abuurto wajiga bunni goof ah. Uma baahnid Qalab Qalin. Kaliya Qalabka Ellipse iyo Qalabka Layskudalayaal oo lagu daray qaar ka mid ah saamaynta aasaasiga ah sida Glowga Gudaha, Hooska Dhiga ama Saamaynta Warp
40. Abuur Dabeecad Lagu Wareysto Farshaxanka Buugga Adoo Isticmaalaya Sawire iyo Photoshop
Casharradan oo laba-qaybood ah oo ku saabsan abuurista "Aynu aadno Dugsiga Cunsurrada!" daboolka buugga, wuxuu ku tusi doonaa geedi socod dhammaystiran laga bilaabo sawirka hore illaa farshaxanka ugu dambeeya, iyadoo la adeegsanayo Sawire-yaqaanka illaa Photoshop-socodka isku-dhafan. Qaybta 1aad waxaad u shaqaalayn doontaa Sawir-qaade si uu u raadiyo sawir gacmeedkayaga, u dhigno qaababka una qeexo midabada aasaasiga ah.
41. Sida Loo Sameeyo Naqshad T-Shirt Naqshadeysan oo Cagaf Cagaaran
Ku mashquulo Adobe Illustrator oo nashqadee dabeecad jilicsan oo qurux badan iyo muuqaal ku xeeran oo leh laba midab oo keliya, diyaarna u ah sidii naqshad funaanad qabow ah.
42. Sida Loo sawiro Astaamo Ey Cute Vector qurux badan oo muujiye ah
Raac tillaabadan adigoo u maraya habka naqshadeynta qaab sameynta dabeecad vector. Waxaad ku bilaabi doontaa sawir gacmeed ah ee eyga Chris Spooner, Jake labrador retriever, ka dibna ku dar khadad kala duwan, midabyo buuxiyo midabyo iyo tilmaamo si aad u soo saartid matalaad kartoon qurux badan.
43. Sawir Nice Punk Kid ee Sawirka
Casharradan ayaa kugu dhex mari doonta habka loo sawirayo cunug yar oo punk ah oo muujiya sawirka. Waxaad la shaqeyn doontaa qaababka aasaasiga ah si aad u bilowdo, ka dibna isticmaal noocyo kaladuwan oo kala duwan si aad ugu darto qoto dheer iyo faahfaahin ku saabsan sawirkeenna.
44. Sida Loo sawiro Tallaabada Tallaabada Tallaabo
Phineas iyo Ferb waa taxane majaajillo majaajillo ah oo telefishan ah. Waxaa sidoo kale loo yaqaan "Disney's Phineas iyo Ferb". Casharradan waxay ku saabsan tahay oo kaliya Ferb halkaasoo lagugu hagi doono sida loo sawiro Ferb talaabo talaabo ah Sawirka. Waa casharro aasaasi ah oo bilowga ah ay sidoo kale si fudud ugu tababaran karaan. Waxa kale oo aad kala soo bixi kartaa feylka isha ee Ferb dhamaadka casharkaan.
45. Ka sameyso Kaar Doofaar Cute ah Sawirka
Casharradan ayaa looga dan leeyahay inay kaa hagto buug-gacmeedka illaa shaashadda; "Doofaar Cute" oo qalin lagu sawiray dhowr daqiiqo gudahood oo loo tarjumay kaarka vector.
46. Abuuritaanka Astaamo lagu qanci karo
Casharradan, waxaad ku baran doontaa xoogaa xirfado aasaasi ah oo aad dabeecaddaada uga beddeleyso qalin qalin si aad uhesho muuqaal dhammaystiran, midab dhammaystiran leh - barashada xirfadaha Sawirka Muhiimka ah ee waddada.
47. Sawirka Astaamaha: Tuug Bunny!
Casharradan ayaa mari doonta habka loo adeegsado qaabeynta qaabeynta farshaxankaaga. Baro sida loo sameeyo nuska shaqada laakiin wali faa iidada buuxda ka hel farshaxankaaga.
48. Sida Loo Sameeyo Sawir Beeleed Qosol Badan
In kasta oo ay khatar badan yeelan karaan, shinnida adduunka oo dhan ayaa looga jecel yahay malab ay soo saaraan. Casharkaan waxaad ka baran doontaa sida loo abuuro sawir qosol leh oo shinni ah gudaha Adobe Illustrator.
49. Naqshadeyso Catar Hamster Avatar ah
Baro sida loo qaabeeyo hamster qurux badan Sawirka laga soo bilaabo meesha ugu hooseysa. Waxa kale oo jira cod dhawaaq ah oo lagu daray casharrada kaa caawinaya inaad shaqayso
50. Sawir Astaamaha Dumarka Qurxoon
Nolosha xafiisku waxay noqon laheyd mid caajis badan haddii aysan jiri lahayn kuwa xoghaynta kulul oo adag. Casharkaan fudud wuxuu ku tusayaa sida loo abuuro dabeecad dumar ah oo qurux badan adoo adeegsanaya Sawirka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » 50 Casharrada Sawirka Hal abuurka
Muxuu yahay maqaal wanaagsan, casharro wanaagsan oo wanaagsan oo lagu abuurayo sawirro, in kastoo ay jiraan xiriiro aan shaqeynin